Ndị na-emepụta ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ - China Okpomọkụ Nyefee Label Factory
Filmse ihe osise bụ ụdị ihe eji ebipụ ederede ma ọ bụ ụkpụrụ achọrọ site na ịkpụcha ihe ndị ọzọ, ma kpoo ọdịnaya a pịrị apị na akwa. Nke a bụ ihe mejupụtara gburugburu ebe obibi enyi na enyi ihe onwunwe, obosara na agba nwere ike ahaziri. Ndị ọrụ nwere ike iji ihe a mee pr ...
TPU hot gbazee ịke mma mpempe akwụkwọ
A na-akpọkwa ihe nkiri ịchọ mma dị elu ma dị ala n'ihi na ọ dị mfe, dị nro, na-agbanwe, akụkụ atọ (ọkpụrụkpụ), dị mfe iji na njirimara ndị ọzọ, a na-ejikarị ya dị iche iche akwa akwa dị ka akpụkpọ ụkwụ, uwe, akpa, wdg. Ọ bụ oke nke ejiji oge ezumike na spo ...
Ihe nkiri a na-ebipụta bụ ụdị ejiji ejiji gburugburu ebe obibi, nke na-ahụta nnyefe ọkụ nke usoro site na ibipụta na ịpị ọkụ. Usoro a na-anọchi akwụkwọ ngebichi ọdịnala, ọ bụghị naanị na ọ ga-adaba adaba ma dịkwa mfe iji rụọ ọrụ, kamakwa ọ na-egbu egbu na enweghị isi ....